Kumuu ahaa Taliye Bedel oo dhawaan shil gaadhi ku dhintay? | Qaran News
Kumuu ahaa Taliye Bedel oo dhawaan shil gaadhi ku dhintay?
Writen by Qaran News | 12:41 pm 13th Jul, 2020
Kumuu ahaa Taliye Bedel
Marxuum Gaashaanle Bedel Xasan wuxuu ka mid ahaa dhalinyaraddii Hargaysa ku dhalatay lixdamaadkii kuna barbaartay’waxaanu kasoo jeedey qoys caana oo aad loogga yaqaano Magaaladda Hargaysa iyo nawaaxigeedda .
Bedel aabihii Xasan Qayl wuxuu ahaan jirey odayaashii xoolaha nool dhoofin jirey ( adhiilayaasha) adeerkii cabdi dheerana wuxuu ahaa odayaashii Hargaysa ku lahaa huteeladda waagii danbena caan u ahaa Hoteelkii cabdi dheere ee ku yaalay xaafadda Siiney ee Magaaladda Mogdisho .
Waagii ay magaaladda Hargaysa ka dhaceen dagaaladii u dhaxeeyey snm iyo taliskii M S Barre , Bedel wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii ku biirtay jabhadii snm , waxaanu ka mid noqday guutadii 12aad ee ka hawl-geli jirtay inta badan wadada Hargaysa iyo Berbera .
1990 markii la aasaasay guutadii horseedka u noqotay xoraynta wadanka ee Koodbuur Berbera ilaa Lawya-caddo , Bedel wuxuu ka mid noqday 150 askari oo ka mid ahaa guutadii 12aad oo ka qayb noqday guutadii Koodbuur , Guutadaas oo ka koobnayd guutooyinkii 10aad ( sancaani) 3aad iyo 12aad , waxaanu markiiba ka mid noqday dhalinyaradii noqotay saraakiisha ee guutadii koodbuur .
Waagaasna Bedel wuxuu ka qayb galay hawl-galadii xoraynta Bali-gudbadle , Mashruuca wajaale , Berbera , Lughaya , Bariisle iyo ugu dambayn Saylac iyo xuduudka Djabouti .
Mudadii ay socotay dib u dhiska wadanku ee meel walba ay joogeen jabhadiihii loo bixiyey daydaygu , Bedel wuxuu ka mid ahaa odayaashii jabhadaha iyo bulshadda u dhaxayn jirey ee marwalba xalin jirey dhibka ka dhex dhaca jabhadaha dhexdooda iyo dadka iyo jabhadaha waagaas ayaanan maqlay magaciisa markii iigu horaysay .
25 sanadood ee u danbeeyey noloshiisa marxuumku wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliska , gaar ahaan ka hawl-gasha magaalada Hargaysa , waxaanu Taliye ka noqday inta badan sal-dhigyadda magaaladda Hargaysa intooda badan .
Mudooyinkaa uu ahaa Taliyaha oo aanu si toosa uga wada shaqaynaynay dacwadaha ciqaabta ah , marar badana aan suaalo ku waydiiyey maxkamadda horteedda , waxaan qirayaa in aanan waligay arkin cid ninkaa ka cabanaysa haday tahay maxaabiista , looyaradda ama bulshadda , waxaanu ahaa nin edeb badan , afgaaban oo sharciga iyo cadaalada inta badan ku adag.
Dhiiranaan badan oo uu u dhashay iyo daacadnimadiisa laggu yaqaanay awgeed mar walba waxaa loo bedeli jirey saldhiga ugu rabshadaha badan ama rabshuduhu ka jiraan , waanu xalin jirey , waxaanu marar badan u mutaystay amaan bulsho oo balaadhan iyo bogaadin .
Dhinaca kale , marxuumka oo aan marar badan suaalo waydiiyey isagoo markhaati ahaan loo horkeeney maxkamadda waxaan ku arkay daacadnimo iyo run sheegid , wuxuu ahaa nin aan cidna ku gefin , waxba buunbuuninin wax walba inta uu ogyahay ka sheega oo aan ka waabanin runta , sidaana waxaan u leeyahay waxaanu isla soo maray dacwadi badan oo culayskooda lahaa .
Waxyaabaha gaarka ah ee aan hoosta ka xariiqayana waxaa ka mid ahaa habeen habeenada ka midda ayaa waxaa ii yimi wiil baasaboor lagga iibiyey oo hadana la dhacay , ka dibna waxaanu ashtako ugu tagnay marxuumka oo joogey saldhiga New Hargaysa oo aan ahayn halka falkaasi ka dhacay hassa yeeshee aad ugu dhaw waxbana aan u jirin , marxuumku baadhis dheer oo uu markiiba kiiskii ku sameeyey wuxuu noogu jawaabay ” orda oo ka dacwooda saldhiga u dhaw meesha falku ka dhacay , meel walba boolis somaliland ah iyo saraakiil somaliland ah baa joogee ”.
Si kastaba ahaatee geeriddu waa xaq , qof walibana waa geeriyoon doonaa , hassa yeeshee geeridda ayaa kala duwan , Bedela wuxuu geeriyooday isagoo gutay waajibkii Qarankiisa ka saaraa oo waliba si sharfle u gutay , waxaana la joogii xiligii Qaranku gudan lahaa waajibka ka saaran daryeelka xaaska iyo caruurta marxuumku ka tagay .